Warar - Ka-guurista Aaladda Awoodda Deggan ee aan Degganayn oo leh Solar iyo Baytariyada
Ka-guurista Xarigga Awoodda Deggan ee leh Solar Solar iyo baytariyada
Marka lagu daro kororka korantada iyo saameynta xun ee deegaanka ee aan ka aragno nidaamka shabakadeena, layaab malahan in dad badan ay bilaabaan inay ka weecdaan ilaha dhaqameed ee awooda oo ay raadinayaan wax soo saar lagu kalsoonaan karo oo guryahooda iyo ganacsiyadooda ah.
Maxay Yihiin Sababaha Ka Dambeeya Guuldarooga Korontada Korontada?
In kasta oo shabakadda tamarta ay tahay mid awood badan oo aad u qurux badan, haddana dhibaatooyinkeedu way sii kordhayaan, iyagoo sameysanaya tamar kale iyo awood dib-u-habeyn xitaa ka sii daruuri u ah guusha hoyga iyo ganacsiga.
1. Kaabayaasha Dhaqaalaha
Markay qalabku sii gaboobaan, waxay noqoneysaa mid aan la isku halleyn karin, taasoo keeneysa baahida dayactirka iyo casriyeynta. Haddii dayactirkan lama huraanka ah aan la dhameystirin, natiijadu waa koronto la'aan socota. Shabakadahaan sidoo kale waxay u baahan yihiin in la cusbooneysiiyo si loogu dhejiyo ilaha korantada ee dib loo cusboonaysiin karo sida guryaha leh baalayaasha qoraxda laakiin wali waxay ku xiran yihiin shabakada.
2. Masiibooyinka dabiiciga ah
Duufaanno daran, duufaanno, dhulgariirro, iyo duufaanno waxay sababi karaan waxyeello weyn iyo khalkhal gelinta shabakadda. Markaad ku darto dabeecadda hooyada kaabayaasha horay u gaboobay, natiijadu waxay noqoneysaa waqti dhimis aad u badan guryaha iyo ganacsiyada.
Khatarta sii kordheysa ee hagar dayaasha awooda u leh helitaanka qaab dhismeedka shabakadeena oo sababi kara khalkhal awoodeed ayaa ah qodob kale oo saameynaya xasiloonida nidaamka shabakadeena. Jabsadayaashu waxay awood u yeesheen inay la wareegaan gacan ku haynta shirkadaha korantada ee kala duwan, taas oo iyaga siinaysa awood ay ku joojiyaan qulqulka korontada ee guryahayaga iyo meheradaheena. Soo-galootiga galaangal u yeelanaya howlaha shabakadda ayaa ah khatar weyn oo u horseedi karta cilad ku soo baxda ciidda.
Dhacdooyinka khaladaadka aadanaha ayaa ah qodobka ugu dambeeya ee gacan ka geysta koronto la'aanta. Maaddaama soo noqnoqoshada iyo muddada goosgoosyadan ay sii socdaan, kharashyada iyo khasaarooyinka ayaa sii kordhaya. Nidaamyada macluumaadka iyo adeegyada bulshada sida booliska, adeegyada ka jawaab celinta xaaladaha deg-degga ah, adeegyada isgaarsiinta, iwm., Waxay ku tiirsan yihiin korontada si ay ugu shaqeyso heerarka ugu yar ee la aqbali karo.
Solar Solar xal xariif ah oo lagula dagaallamayo xasillooni darrada korantada korantada?
Jawaabta oo gaaban waa haa, laakiin taasi waa kaliya haddii rakibidaada si sax ah loo dhammeeyo. Rakibaadda baytariyada keydka ah ee keydinta tamarta xad-dhaafka ah iyo waxyaabo badan oo caqli badan sida qalabka korontada ku shaqeeya ee cadceedda ayaa naga ilaalin kara koronto la’aanta horay u socota waxayna ganacsiyada ka badbaadin kartaa lacag badan.
Grid-Tied vs Solar-Qoryaha Off-Grid
Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya shabakadda qorraxda ee ku xiran grid-grid iyo shabakadda ayaa ku jirta keydinta tamarta nidaamkaaga qorraxda uu soo saaro. Nidaamyada ka baxsan shabakadda ayaan marin u helin shabakadda korantada waxayna u baahan yihiin baytariyada keydka ah si ay u keydiyaan tamartaada xad-dhaafka ah.
Nidaamyada qorraxda ka baxsan-shabakaddu badanaa way ka qaalisan yihiin nidaamyada ku xiran shabakadda maxaa yeelay baytariyada ay u baahan yihiin waa qaali. Waxaa lagugula talinayaa inaad maal gashato koronto-dhaliye nidaamkaaga ka-baxsan shabakadda haddiiba aad u baahato awood markii ay tahay habeenkii ama marka cimiladu aysan fiicnayn.
Iyadoo aan loo eegin waxa aad go'aansato, inaad ka weecato shabakadda korontada ee aan la isku halleyn karin iyo inaad la wareegto halka ay awooddaadu ka timaado waa xulasho caqli badan. Macaamiil ahaan, kuma guuleysan doontid oo keliya kayd dhaqaale oo muhiim ah, laakiin sidoo kale waxaad heli doontaa heer aad loogu baahan yahay oo ammaan iyo joogtayn ah oo awooddaada ka dhigaysa mid hagaagsan oo soconaysa marka aad u baahato inta ugu badan.
Iftiinka Daadka Qoraxda, Nalalka Bannaanka ee Qoraxda, Iftiinka Beerta Qoraxda, Solar rogayaasha, Off Inverter Roobka, Iftiinka Wadada Cadceeda,